Home Wararka Gudaha Xog: Diyaarad ka kacday Muqdisho oo loo diiday inay ka degto gobolka...
Xog: Diyaarad ka kacday Muqdisho oo loo diiday inay ka degto gobolka Gedo
Diyaarad rakaab ah oo ka kacday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa shalay loo diiday ina ka degto laba garoon diyaaradeed oo ku yaalla gobolka Gedo, sida ay ogaatay Warabahinta.
Ilo-wareedyada la hadlay Warabahinta ayaa sheegay in sababta diyaaradda looga hor-istaagay inay degto ay aheyd inuu saarnaa Maxamed Cabdullaahi Gardhuub oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo.
Previous articleSiyaasadda Soomaaliya: Waa kuma Xamsa Cabdi, ninka ay hadal-hayntiisu qabsatay baraha bulshada?
Next articleDEG-DEG:-Shirkii ceergaabo ee beesha warsangali iyo maamulka somaliland oo bur buray iyo sababta.
Basaas Ruush Ah Oo Isku Dayay Inuu Si Qarsoodi Ah Uga...